Xiisadda Hiiraan: Maxay yihiin ciidamada Haramacadka ee Beledweyne loo daabulay? - BBC News Somali
Xiisadda Hiiraan: Maxay yihiin ciidamada Haramacadka ee Beledweyne loo daabulay?
3 Maarso 2020
Waa la cusbooneysiiyay 26 Jannaayo 2022
Xigashada Sawirka, PMO
Warrarka laga helayo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, ayaa sheegaya in saaka dhawr diyaaradood oo siday ciidamada Gorgor ee Milatariga Soomaaliya, iyo ciidanka gaarka ah ee Booliska ee loo yaqaano Haramcad ay ka dageen garoonka diyaaradaha ee Beledweyne sida ay BBC-da u sheegeen illo dhinaca amniga ah.
Ciidankan ayaa saaka laga qaaday magaalada Muqdisho. Waxaan si gaar ah warbixintan ugu eegeynaa ciidammada Harmacad.
Ciidamada Haramacad waxaa horey loogu daad gureeyay Galmudug, xilligaas oo meesha ay ka saareen ciidamadii Ahlu-Sunnah Waljamaaca. Sidoo kale waxay qeyb ka ahaayeen askartii sugeysay amniga shirarkii madaxda Soomaaliya ku dhexmaray Dhuusamareeb.
Xilligaas, dad badan ayaa baraha bulshada aad u wareejinayay sawiradda xayawaanka Haramacadka iyo ciidanka dowladda ee loogu magac-daray.
Ciidanka Haramacad ayaa sidoo kale qeyb ka ahaa ciidankii la geeyay magaalada Baydhaba xilliga doorashada Koonfur Galbeed, waxaana sidoo kale loo daabulay qeybo ka mid ah gobolka Gedo.
Sidoo kale ciidamada Haramacad waxay qeyb ka ahaayeen ciidamadii Ahlu-Sunna ka saaray Dhuusamareeb ka dib dagaal ka dhacay halkaas.
Ciidanka Haramacad maxay yihiin?
Xigashada Sawirka, Booliska Soomaaliyeed
askari katirsan ciidanka Haramacad
Ciidanka Haramacad oo katirsan booliska Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa la asaasay markii uu xukunka qabtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waana ciidan si gaar ah loogu tababaray ka hortagga rabshadaha iyo dagaallada ka dhaca magaalooyinka.
Ciidankan oo tiro ahaan lagu qiyaasay kun askari ayaa waxaa tababaray dowladda Turkiga oo gudaha dalkeeda u qaada, halka qaarna ay tababarka ku qaataan xerada TurkiSom ee Muqdisho.
Inta badan hubka ay wataan ayaa ah mid fudud, waxaana ay u carbisan yihiin shiishka iyo hawlgallada qorsheysan.
Tuutaha ay wataan askarta Haramacad ayaa ah mid ka duwan ciidamada kale ee booliska, waxaana intooda badan ay horay uga tirsanaayeen ciidanka nabadsugidda ee NISA, sida uu BBC-da u sheegay Cabdisalaam Guuleed, taliye kuxigeenkii hore ee NISA.
Ciidanka Haramacad waxaa tababaray
"Ciidamadan waxa ay intooda badan ka mid ahaayeen askartii NISA ee hubka sitay, balse dowladda hadda jirta ayaa u bedashay booliska sida gaarka ah u tababaran. Waxa ay u badan tahay in magacooda Haramacad lagu saleeyay midabka tuutaha ay xiran yihiin," ayuu yiri Cabdisalaam Guuleed, taliye kuxigeenkii hore ee NISA.
Cabdisalaam ayaa sheegay in qaabka loo adeegsaday awoodda ciidamada Haramacad ay niyad jab ku tahay dalalka dhaqaalaha ku bixiyay tababarka iyo tayayntooda.
Ciidamada Soomaaliya diyaar ma u yihiin in ay amniga kala wareegaan AMISOM?
16-kii askari ee Kismaayo ka lugeysay sidey Baraawe ku gaareen?
Ciidamadan oo waayihii dambe soo shaac baxay ayay dad badan dowladda ku dhaliileen inay u adeegsato dano siyaasadeed, cududda ciidmaadanna loo baahnaa in loo adeegsado dagaalka ka dhanka ah Al Shabaab.
"Dowladda Soomaaliya iyadaa loo tababaray ciidamada isla markaana xaq u leh halka ay geyneyso iyo qaabka ay u hawlgelinayso, balse waxaa su'aal la gelin karaa cawaaqibka ka dhalan kara in ciidamada loo adeegsado dano siyaasadeed oo laga weeciyo dagaalka Al-Shabaab. Taasi waxa ay keeni kartaa in laga guul gaari waayo dedaalka loogu jiro in cunaqabateynta hubka laga qaado Soomaaliya," ayuu yiri Cabdisalaam Guuleed.
Ciidanka Haramacad oo ku sugan Galmudug
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo dhaliilay hawgallada ay fuliyaan ciidamada Haramacad ayaa dhawaan magaalada Bosaaso ka sheegay in ciidanka Haramacad "si khaldan loo adeegsanayo,"
"Haddii Haramacad loogu talagalay in dawacada reeraha ariga ka cunta ee Al Shabaab ah loogu talagalayna talo ayay ahaan lahayd, laakiin Haramacad xoolihii iyo dadkiiba cunaya runtii waa arrin aan fiicneyn, suurad xunna ka dhalinaysa Soomaalida dhexdeeda," ayuu yiri madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni oo dhawaan ka hadlay ciidamada Haramacad.
Taliyaha ciidanka Haramacad, Farxan Maxamuud Qaroole
Haramacad ayaa u badan rag dhallinyaro ah, waxaana taliye u ah nin da' yar oo lagu magacaabo Farxan Maxamuud Qaroole oo ah dhallinyaro.
BBC-da ayaa isku dayday inay xiriir la sameyso mas'uuliyiinta dowladda, si ay uga jawaabaan dhaliilaha loo jeediyay ciidankan, hase yeeshee way ka gaabsadeen inay ka hadlaan.
Diiwaan gelinta casriga ah ee ciidamada Soomaaliya
20 Nofembar 2019
Ma lagu guuleysan karaa dhismaha ciidammada qaranka Soomaaaliya?
4 Disembar 2017
Khilaafka doorashada: Maxay tahay sababta ay Gedo xudunta ugu noqotay khilaafka?
6 Febraayo 2021
Faallo, The New York Times: Soomaaliya oo dhan dab ayaa la qabadsiinayaa
31 Luulyo 2017
Wax ka ogow tirada Ciidamada Mareykanka ee uu Biden usoo dirayo Soomaaliya iyo tiradii hore?
Oodkac iibiyihii isubeddelay fannaan caan ah